Ndị edemede onwe ha I. Francisco Hergueta. Ajụjụ 10 nye onye okike nke Ernesto Sacromonte | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ndị edemede onwe ha I. Francisco Hergueta. Ajụjụ 10 nye onye okike nke Ernesto Sacromonte
Foto: (c) El echo de Valdepeñas.
Isiokwu mbụ nke izu a raara nye ndị ode akwụkwọ nwere onwe ha. Have ga-enye ha obere ohere site n'oge ruo n'oge ma taa m na-eweta Francisco Hergueta. Onye edemede nke Solana (Ciudad Real), ya na akwukwo abuo nke onwe ya, bilogy nke akụkọ ihe mere eme nnọọ ụtọ starring Ernesto Sacromonte kwuru, paireti nke narị afọ nke XVI. Ha bu aha M na-a swearụ iyi ịkwado gị y M swearụọ iyi imegwara na sobtaitel nke Akụkọ banyere Ernesto Sacromonte.
Francisco Hergueta na-ewebata onwe ya ma zaa anyị Ajụjụ 10 gbasara ahụmịhe gị na-ebi akwụkwọ ụwa, ya akwụkwọ na ndị edemede ọkacha mmasị, ha omume ntụrụndụ dị ka onye edemede na onye na-agụ na ọdịnihu ha oru ngo na echiche efu.
0.1 Ọnye na-bụ Francisco Hergueta?
0.2 Akụkọ banyere Ernesto Sacromonte
0.2.1 M na-a swearụ iyi ịkwado gị
0.2.2 M swearụọ iyi imegwara
1 Ajụjụ 10
1.0.1 1. Ì chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
1.0.2 2. Gịnị bụ akwụkwọ mbụ masịrị gị, gịnịkwa kpatara ya?
1.0.3 3. isnye bụ onye edemede gị kachasị amasị gị? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
1.0.4 4. Kedu akparamagwa dị n’ime akwụkwọ nke ị masịrị ị ga-ahụ ma mepụta?
1.0.5 5. have nwere ihe omume ntụrụndụ ọ bụla ị chọrọ ịgụ ma ọ bụ ịgụ?
1.0.6 6. Na ebe mmasị gị na oge iji mee ya?
1.0.7 7. Kedu onye edemede ma ọ bụ akwụkwọ emetụtala ọrụ gị dị ka onye edemede?
1.0.8 8. Udidi udiri nma gi?
1.0.9 9. Gịnị ka ị na-agụ ugbu a? Na ide?
1.0.10 10. Kedụ ka i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ bụ maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ enwere ma ọ bụ chọọ ibipụta ya?
1.0.10.1 Blog nke Francisco Hergueta
Ọnye na-bụ Francisco Hergueta?
A mụrụ m afọ iri atọ na isii gara aga. M bi na La Solana (Ciudad Real), ebe m na-arụ ọrụ na azụmahịa ezinụlọ nke upholstery. Ewezuga ide m hụrụ n'anya gụọ, ihe nkiri na usoroM a bit nke geek na egwuregwu vidio. Mana agbanwere m ihe ahụ niile maka obere akwụkwọ nke dị otu afọ. Ana m agbalị iwepụta oge maka onwe m, mana… gịnị ka m nwere ike ikwu? M hụrụ n'anya oge ọ bụla mụ na ya na-anọ, yabụ ihe ọ bụla ọzọ na-ewere oche azụ.
Banyere ide ihe, amalitere m na Institutelọ akwụkwọ. Mgbe ahụ ọ masịrị m ide ihe fantasy na erotic akụkọ. M zutere ndị nwere ụdị uto na ụwa ndị ahụ na-ejighị n'aka na ịntanetị ma nwee ezigbo ndị enyi nyeere m aka ịbịa ebe a. Ernesto Sacromonte na ahụmahụ ya bụ a ngwakọta nke ahụmịhe ndị a niile, gụnyere ịgagharị Sevilla mụ na onye òtù m. Ugbu a, m na-achọ ikpokọta akụkụ niile nke ndụ m ma wepụta oge iji dee.
Akụkọ banyere Ernesto Sacromonte
M na-a swearụ iyi ịkwado gị
Seville, 1524. Mgbe m napụtasịrị otu ohu n'aka onye egwu Duke Rodrigo de Alcoza, Ernesto Sacromonte kwuru, onye omekome Spanish paireti, goro ndị ahịa Venetị Carlo Colucci to onyeisi ụgbọ mmiri ọhụrụ ya: "Doña Elena". Eziokwu a ga - ewe iwe nke nwa nwanyị Carlo, Isabela, Onye ga agbali igbali Sacromonte.
Na mgbakwunye, onye paireti ga-eche ndị ọchịagha nke Duke ihu, Rodrigo de Alcoza, onye ga-agbali mbo nile iji weghachite Dana, ohu ahụ ezuru ohi, na-emikpu ma onye ohi ahụ na ndị enyi ya na nkata ọjọọ nke metụtara ikike kachasị elu nke alaeze ahụ. Dị ka a ga-asị na ezughi, nwoke dị omimi aha ya bụ "Ọnwụ”Resurfaces si n’oge gara aga nke Sacromonte, na-eti mkpu maka ịbọ ọbọ.
M swearụọ iyi imegwara
Seville, Ọktọba 1524. Rodrigo de Alcoza Ọ gaghị agbaghara mmechuihu e mere ya ma gbalịa iji obi ọjọọ na obi ọjọọ taa ndị iro ya ahụhụ. N'oge ahụ, yana inyocha otu ya na Onye Nnọkọ Ihe Nlekọta Louis nke Besuan, ga-eme atụmatụ mbuso agha kasịnụ n’ocheeze nke Carlos m. Duke ahụ agaghị ekwe ka ndị ohi zuru ike n'ụzọ nke agụụ ya dị ebube wee gwepịa ha n'egbughị oge.
Sacromonte nwere ike iche ụdị anụ ndị dị otú ahụ ihu ma chebe nke ya? Nanị nhọrọ ya ga-abụ ịhọrọ ụzọ a bụrụ ọnụ na nke owu na-ama ya, gọnahụ isi ya ma chee onwe ya ihu; Ihe niile ikwere Ọ ga-agagharị n'okirikiri gbara ọchịchịrị nke mkpụrụ obi ya ebe ịbọ ọbọ na-eri ya. Ọ ga-abụ ụzọ nloghachi? Ọ ga - enwe ike ichebe ezinụlọ ya, ka ego ọ ga - akwụ maka iguzogide ndị dị ike ga - adị oke elu? Iji merie, ọ ga-abụrịrị ihe ọ kpọrọ asị. N'ihi na ọ bụ naanị mmụọ ọjọọ nwere ike imeri mmụọ ọjọọ ọzọ.
1. Ì chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
Akwụkwọ mbụ m chetara ịgụ bụ akụkọ ifo. Mama m anọwo na Círculo de Lectores ruo ọtụtụ afọ wee jụọ mụ na ụmụnne m maka nchịkọta a mgbe anyị dị obere. Obere Ezi, Blancanieves, Obi ike obere ịkwa akwa, Rapunzel... Enweghị m ọkacha mmasị na nke, mana Dumbo Enweghị m mmasị na ya ma ọlị. Banyere akụkọ izizi m dere, echere m na ọ bụ ịga n'ihu akwụkwọ m gụrụ na BUP ochie.
2. Gịnị bụ akwụkwọ mbụ masịrị gị, gịnịkwa kpatara ya?
Akwụkwọ mbụ masịrị m bụ nke mbụ Katidral nke oké osimiri. Ndị ọzọ gara aga nwere ike karịa ma ọ bụ dịkarịa ala dị ka m, ma ọ bụ na ha nwere ike imetụta m n'otu oge dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme, mana nke a karịsịa nwere atụmatụ ahụ dum.
Ọzọ ikpe bụ nke a ọchị, kpọmkwem Egwu Na-egbu. Ọ na-akọ mmalite nke Joker na otu o si eche Batman ihu. Agbanyeghi na enweghị m ike ikwu maka mmetụta, ọ bụ ezigbo nchọta. M na-agụ ụfọdụ Spanish na-atọ ọchị, karịsịa site na Mortadelo na Filemon na ndaba Sacarino bọtịnụ, ma nke a karịsịa bụ obi ọjọọ. Nwere ike iji ọtụtụ nkeji na-emegharị onwe gị na akara ngosi ọ bụla. Kemmasi.
3. isnye bụ onye edemede gị kachasị amasị gị? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
Enweghị m onye edemede kachasị amasị m. Abụ m karịa genres, obu ezie na aghaghm ikweta na agurom akwukwo abuo Agustin Sanchez Vidal (Hụ onye ọ bụla y Igodo isi) ahụkwara m ụzọ ọ na-ede n'anya. Ọ bụrụ na m ga-anọnyere onye edemede, ọ ga-abụ ya. Echere m na n’akwụkwọ ị na-adọrọ mmasị otu ma ọ bụ karịa, mana ọ na-esiri onye edemede ike imeju gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ na-egwu ọtụtụ ụdị.
4. Kedu akparamagwa dị n’ime akwụkwọ nke ị masịrị ị ga-ahụ ma mepụta?
Mepụta ka Harry Potter. Ugbu a dị oke egwu, ọ ga-amasị m ịhụ abụọ: Don Quixote, maka iso ya na-akparịta ụka ma mata nke ọma na ụdị mmadụ ahụ bụ ngwakọta nke ara, obi ike na chivalry, na ịjụ ya ihe bụ ebe dị na La Mancha onye aha ya bụ Cervantes achọghị icheta. Udi agwa ozo bu Justinesite n'aka Marquis de Sade.
5. have nwere ihe omume ntụrụndụ ọ bụla ị chọrọ ịgụ ma ọ bụ ịgụ?
Onweghi nke g’agu, kama ide ihe, m nwere ihe di n’uche: a hundu, ekweisi... Echere m na m jidere ya na-achọ ime ka ọ dị jụụ na kemgbe ahụ achọrọ m ihe. Mania anaghị atụ aro ya n'oge ọkọchị, ma ọ dị ebube n'oge oyi.
6. Na ebe mmasị gị na oge iji mee ya?
Onwere onwe ya na nna ọhụrụ. Oge ọ bụla, ihe dị mkpa bụ ịchọta ya. Ana m ede ihe mgbe niile n'ime ụlọ m. Enwere usoro anarchic nke ọ nweghị onye ọzọ ma ghọta ma na-akasi m obi.
7. Kedu onye edemede ma ọ bụ akwụkwọ emetụtala ọrụ gị dị ka onye edemede?
Karịa onye edemede ma ọ bụ akwụkwọ, ụdị. Akụkọ ihe mere eme. Ha bu akwukwo akwukwo nke kacha masiri m, obu ezie na obughi nke m dere karie. N’amaghi ama, ha rapuru ezi ihe nlere banyere ihe omuma nke Ernesto Sacromonte.
8. Udidi udiri nma gi?
Akụkọ ihe mere eme, nke na-akpali agụụ mmekọahụ na nke dị egwu. Na usoro a. Ide bu ihe ozo.
9. Gịnị ka ị na-agụ ugbu a? Na ide?
Ana m agụ Lolita eji m nwayoo ede akwukwo m ozo. Bụ a erotic novel, dị ugbu a na onye ndị akụkọ ya ga-enwe atụmatụ siri ike.
10. Kedụ ka i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ bụ maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ enwere ma ọ bụ chọọ ibipụta ya?
Phew, ọjọọ. Panorama bụ mal. Enwere ọtụtụ ndị edemede, ọtụtụ. N’eziokwu, ọ bụrụ na ha dị ọtụtụ, e nwere ndị ezigbo ihe na ndị ọjọọ. Ọ bụ ezigbo ọnụọgụ. Na ibipụta onwe Ọ bụ mmepụta nke ọtụtụ narị ndị edemede na-achọpụta na ọ gaghị ekwe omume iji bipụta ya na ndị nkwusa dị oke njọ yana ọ bụkwa ọdọ mmiri nke ndị na-ebipụta akwụkwọ siri ike na-ahụ onye edemede nwere ikike (ya bụ, nwere ike ree ọtụtụ) iji bipụta ya. Na nkenke: a kpochapụrụ panorama ma ọ bụ ezie na enwere ihe bara nnukwu uru n’etiti ndị edemede bipụtara onwe ha, enwekwara ahịhịa ọka ma o siri ike ịchọta ha. Nnukwu ndị nkwusa ekwesighi itinye ihe egwu, naanị nọdụ ala chere ma hụ ihe ntinye akwụkwọ na netwọkụ mmekọrịta.
Blog nke Francisco Hergueta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ndị edemede onwe ha I. Francisco Hergueta. Ajụjụ 10 nye onye okike nke Ernesto Sacromonte
Afọ 159 nke Arthur Conan Doyle. Iberibe 6 nke ọrụ ya.
Ihe omuma nke ndi isi ulo akwukwo: Ihe omuma nke omempụ nke na-abanye n'ime mmegbu.